दृष्टिकोण – Page3– Banking Khabar
नर बहादुर थापा । नेपालमा अहिले वित्तीय क्षेत्रका लागि अवसरहरुको समय छ । यसको मूख्य संकेत हो आर्थिक वृद्धि । विगत दुई वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७.९ प्रतिशतको आर्थिक …
जीबन बीमा र अस्पष्टता
रमेश दियालि । तपाईंहरूले जीबन बीमा गर्नु भएको हुनसक्छ र प्रिमियम पनि बुझाई रहनु भएको हुनसक्छ । तर तपाईंको जीवन बीमाको बारेमा तपाईंको परिवारका सदस्यहरूलाई थाहा नहुन सक्छ । भबिष्यमा हुनसक्ने दुर्घटना र जोखिमका साथै बीमा अबधि पूरा भएपश्चात् क्षतिपूर्ति …
लघुवित्तलाई कष्ट अफ फण्डको आधारमा कर्जा दिनुपर्छ
मिन बहादुर बोहोरा । नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन् । बैंकहरु नपुगेका ठाउँहरुमा पुगेर लघुवित्तहरुले वित्तीय सेवा प्रदान गरेका छन् । आफ्ना दाजुभाई, माईतिहरु, इष्टमित्रले एक रुपैयाँ नपत्याएको मान्छेहरु लघुवित्तबाट विनाधितो कर्जा लिई उद्यमी बनेका छन् …
वित्तीय साक्षरता : आवश्यकता र महत्व
माधव निर्दोष, अध्यक्ष, मिडिया इन्टरनेशनल । वित्तीय साक्षरता भनेको खासमा पैसा सम्बन्धि शिक्षा हो । हामीले पैसालाई न त देखेका छौँ, न त पढेका छौँ, न बुझेका नै छौँ, जसले गर्दा हामीलाई पैसा कसरी कमाउने भन्ने विषयमा अन्यौलता भइरहेको छ …
‘लघुवित्तको संख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्यो’
प्रकाशराज शर्मा, उपाध्यक्ष, माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसन । सामान्यतयाः माइक्रोफाइनान्सले दुई तरिकाबाट गरिबी न्युनीकरणमा सहयोग पुर्याउँछ । (१) रोजगारी सिर्जना : माइक्रोफाइनान्सहरुले तीव्र रुपमा शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । त्यसमाथि माइक्रोफाइन्सहरु नै थपिँदै छन् । ती संस्था र तीनीहरुका शाखामा कर्मचारी राख्नुपर्ने …
वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिन सकेन
नरबहादुर थापा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक । विगत १०।१५ वर्षमा आर्थिक विकास नभएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा वृद्धि भएको छ भने तीनीहरुले दिने सेवामा पनि विकास भएको छ । बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा विकास भइरहेको भए तापनि लगानी, …
दमन प्रसाद पोखरेल । लघुवित्तीय सेवा दिने नेपालका प्रायः सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सदस्यता त्याग गर्ने विषयले एउटा ठुलो समस्याको रुप लिँदै गएको छ । त्यसले समाजमा लघुवितप्रति नै नकारात्मक सन्देश दिइरहँदा यसलार्ई रोक्नु निकै नै चुनौतिपूर्ण बन्दै गइरहेको …
सुरज घिमिरे । अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । एकातिर अर्थतन्त्रको अवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको असल कर्जाको परिणामलाई निर्धारण गर्दछ भने अर्काेतिर बैंकिङ क्षेत्रको विकासको गतिले अर्थतन्त्रको गतिलाई दिशा प्रदान गर्दछ । अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदा बैंक …
तेजेन्द्र शर्मा लम्साल । आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धमा सुझाव माग भएकोले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सन्दर्र्भबाट मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरण अन्तर्गत देहाय बमोजिमका व्यक्तिगत सुझावहरु उल्लेख गरिएको छ । १. आर्थिक वर्ष २०७३।७४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडोर पद्धतिलाई …
नारायणलाल श्रेष्ठ । बैकिङ्ग प्रोफेसनमा व्याजदर नौलो विषय होइन । मूलभुत रुपमा बैंकको काम नै व्याज तिरेर निक्षेप तथा सापटीको रुपमा रकम संकलन गर्ने र व्याज लिएर ऋण दिने हो । जसको लागि बैंकले लिने र दिने व्याजदर तोकेको हुन्छ …
ढुन बहादुर बुढाथोकी, “सङ्घर्ष” । जेठ ७ सोमबार संघीय संसदको बैठकमा सम्मानीय राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीबाट ०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रथम पदचापमा पस्किएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बिशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । …
चिरञ्जिवी चापागाईँ । बीमा समितिले बीमा क्षेत्रमा बीमितहरुको हकहितको लागि विगत साढे दुई दशकदेखि संस्थागत रुपमा नै कार्य गर्दै आएको छ । हालैका दिनहरुमा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय बीमा नियमनकारी निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनद्वारा प्रतिपादित बीमाका मुलभूत सिद्घान्तहरुलाई आत्मसाथ गर्दै बीमितको हक हितलाई …
डा. युवराज खतिवडा । बीमा समितिले स्थापनाको ५० औँ वर्ष मनाइरहेको छ । यस अवसरमा बीमा समितिमा उमेर नै नभई बुढेउलीको अवस्था नदेखियोस बन्ने शुभकामना दिन चाहान्छु । बीमा क्षेत्रको हालसम्मको प्रगति र बीमा समितिको कार्यशैली हेर्दा धेरै समस्याहरु देखिन्छन् …
प्रवीण रमन पराजुली । वित्तीय योजना तर्जुमाका लागि जीवन बीमा अत्यन्तै आवश्यक छ । आफ्ना बालबच्चाको र आफ्नो सुरक्षित भविष्यका लागि बीमाको आवश्यकता पर्दछ । वर्तमानमा गरेको निर्णयले भविष्य सुरक्षित बन्छ । बचतले मात्रै फाइनानसीयल प्लानिङ गर्दैन । बीमा यस्तो …
डा. चिरंजीबि नेपाल । संसारका विकसित देशका जति पटि पर्यटकहरु नेपालमा आउँछन्, त्यसमध्येका ५० प्रतिशत पर्यटकहरु सेयरमा लगानी गरेको पैसाको नाफाबाट घुम्न आउँछन् । विकसित मुलुकहरुमा बचत भएको पैसा छ भने सेयर बजार लगानी गरिहाल्ने प्रचलन देखिन्छ । हामीसँग त्यो …